Bounce rate ndeimwe yeaya maKPI ayo vatengesi vedigital vanoshandisa yakawanda nguva kuongorora uye kuyedza kugadzirisa. Nekudaro, kana iwe usinganzwisise zvizere kuti chii chinonzi bounce, unogona kunge uchikanganisa munzira yaunoedza kuzvivandudza nayo. Ini ndichafamba kuburikidza nedudziro yeye bounce rate, mamwe ma nuances, uye dzimwe nzira dzaungagadzirise yako bounce rate. Bounce Rate Tsananguro A bounce ndeye-peji-rimwe chete chikamu pane yako saiti. In
Google Analytics: Usarekodha Subdomain Dzvanya seBounce
Chishanu, June 13, 2014 Chishanu, June 13, 2014 Douglas Karr
Vazhinji vedu vatengi iSoftware seSevhisi vanopa uye vane zvese zviri zviviri webhusaiti uye saiti yekushandisa. Isu tinopa zano kuti maviri anowanzo chengetwa akapatsanuka sezvo iwe uchida kurerukirwa uye kuchinjika kweiyo manejimendi manejimendi sisitimu yako, asi usade kudzorwa neyakagadziriswa vhezheni, chengetedzo uye zvimwe zvinhu nechako chikumbiro. Nekudaro, izvo zvinounza matambudziko kana zvasvika kuGoogle Analytics kana iwe uchimhanyisa maakaundi maviri akapatsanuka -
Firefox 3 Ongororo, Marobhoti, Wedzera-mairi uye maTweaks
Chishanu, June 20, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Izuva repiri neMozilla Firefox 3 uye ndatoburitsa Safari kubva kudoko rangu. Bhurawuza racho rinokurumidza kwazvo (Ndiri kufungidzira kusvikira ese angu akakurumbira mawedzero uye mashoma ekuvandudzwa ekuchengetedza asvika). Ini ndinotenda zvakakodzera kukwiridzira uye ndinogona kumirira mazuva mashoma kusvikira mawedzera-ons akurumidza. Usability Improvement paButton Layout Shanduko inonyanya kuoneka paunovhura FF3 ndiyo hombe kumashure bhatani mu